Akon’ny dian’ny Filohan’ny Antenimierandoholona tany amin’ny Faritra Matsiatra Ambony – Sénat de Madagascar
Akon’ny dian’ny Filohan’ny Antenimierandoholona tany amin’ny Faritra Matsiatra Ambony
May 2, 2018 RAMBELO Abel NIRINA
“Ny fanajana ny lalàmpanorenana ihany no fototra hisian’ny filaminana ara-politika”
Nanatanteraka famelabelaran-kevitra sy tatitra tamin’ny vahoakan’i Fianarantsoa sy ireo tompon’andraikitra miankina sy tsy miankina ary ireo Antoko Politika maro samy hafa tao amin’iny Faritra Matsiatra Ambony iny ny Filohan’ny Antenimierandoholona sady Filoha Nasionalin’ny Antoko HVM Rivo ,RAKOTOVAO notronin’ireo Loholona sy mpikambana ao amin’ny Governemanta ary ny lohandohany ao amin’ny Antoko HVM ny 28 sy ny 29 aprily 2018 . Famelabelaran-kevitra narahana ady hevitra no notanterahana tamin’izany ka nanazavan’ny Filohan’ny antoko Rivo RAKOTOVAO ny mikasika ny fototry ny ady hevitra ara-politika misy eto Madfagasikara ankehitriny, dia ny lalàm-pifidianana hiatrehana ny fifidianana Filoham-pirenena 2018 sy ny Solombavambahoaka. Aoka tsy ho adinoina fa efa nandroso tolo-kevitra ny Filohampirenena Hery RAJAONARIMAMPIANINA mba hiaraha-midinika ny momban’ny andininy sasantsasany izay ahiana hiteraka disadisa ao anatin’ny lalàm-panorenan’ny Repoblika faha efatra, saingy tsy nanaiky izany ireo mpanao Politika sasany. Ankehitriny dia lany teo anivon’ny Antenimiera roa tonta ny lalàm-pifidianana izay nasiana fanitsiana avy amin’ny tolo-kevitra nentin’ireo Fiarahamonim- pirenena sy ireo Solombavambahoaka. Anjaran’ny Fitsarana avo momban’ny Lalàm-panorenana no mizaha sy mitsara raha toa ka mifanaraka amin’ny lalàmpanorenana ilay lalàna na tsia. Nitaona ny rehetra ny Filohan’ny Antenimierandoholona mba hanaja ny lalàna satria tany tan-dalàna I Madagasikara ary nanentana ny vahoaka Malagasy ihany koa ny tenany mba ho tony. Etsy an-danin’izany dia nambarany fa misokatra hoan’ny rehetra ny varavaran’ny antoko amin’izay mety ho tolo-tanana hikatsahana ny tombotsoan’ny vahoaka sy ny Firenena. Nandritra izany fotoana izany dia nisy ny fanomezazna sehatra mivantana an’ireo rehetra nanatrika ka nandraisana ny hetaheta sy soso-kevitra ary fanakianana mahakasika ny raharaham-pirenena amin’ny ankapobeany.
Nandritra ny fidinana ifotony nataon’ny Filohan’ny Antenimierandoholona tany amin’ny Faritra Matsiatra Ambony dia nisy ihany koa ny fihaonany notronin’ireo mpikambana ao amin’ny Governemanta sy ireo Loholona tamin’ireo Ben’ny tanàna rehetra izay nahitana antoko maro samy hafa toa ny MAPAR, TIM, HVM, MTS sy ny sisa avy any amin’iny Faritra iny, izay nandraisana ny hetaheta sy ny soso-kevitra mba hahafahana mampandroso ny Firenena. Nandritra io fihaonana io ihany koa no nanazavan’ny Filohan’ny Antenimierandoholona fa amin’ny maha mpiahy sy mpisolo-tena ny Antenimierandoholona dia adidin’izy ireo ny mihaino sy midina ifotony, ka nanazavany ny zava-misy momba ny toe-draharaha politika ankehitriny; nanambarany fa anisan’ny vaha-olana iray lehibe ny fanazavana izany amin’ireo tompon’andraikitra eny ifotony izay hampita kosa any amin’ny vahoaka. Teo ihany koa ny nanomezan’ireo mpikambana eo anivon’ny Governemanta vaha-olana avy hatrany an’ireo Ben’ny tanàna.
Namaranan’ny Filohan’ny Antenimierandoholona Rivo RAKOTOVAO izay nisolo tena ny Filoham-pirenena notronin’’ireo mpikambana ao amin’ny Governemanta ny Fitsidihana iny Faritra Matsihatra Ambony iny ny fanotronana ny fankalazana ny faha 15 taonan’ny Diosezin’ny Fiangonana Anglikana Fian arantsoa ary ny fitokanana ny Katedraly SANTA MARKA, ka fotoam-pivavahana lehibe no notanterahana tamin’izany notarihin’i Mon Seigneur RATELOSON Gilbert niaraka tamin’ireo Eveka manerana ny Faritany enina eto Madagasikara, ny Arsevekan’ny Seychelles JAMES Wong tompon’andraikitra voalohany amin’ny fitambaran’ny Fiangonana Anglikanina ao anatin’ny Firenena Seychelles, Maurice ary Madagasikara. “Fa lozako raha tsy mitory ny filazantsara aho” I Kor 9,16b no tenin’ny soratra masina nentin’ny Fiangonana nankalazana ity andro lehibe ity izay nentina nankaherezana ireo mpino sy mpitantana rehetra ao amin’ity Fiangonana ity. Nandritra ny toritenin’ny Arsevekan’i Seychelles JAMES Wong no nanambarany fa vaha-olana ho an’ny Firenena Malagasy ny fihaonana eo amin’ny mpitondra sy ny mpanohitra, ary tokony hisy ny fifampiresahana mba hikatsahana ny fiadanana ho an’ny vahoaka Malagasy. Nandritra ny fandraisam-pitenenana nataon’ny Filohan’ny Antenimierandoholona no nitondrany ny fialan-tsiny amin’ny tsy fahatongavan’ny Filohampirenena. Nankasitraka sy nankahery ireo mpitanatana sy mpino rehetra ihany koa ny tenany amin’ny ezaka rehetra nataon’izy ireo , nisaorany manoka ny teny sy ny vavaka natolotry ny Arsevekan’ny Seychelles JAMES Wong ho an’ny Firenena sy ho an’ny vahoaka Malagasy rehetra. Na dia tsy tany an-toerana aza ny Filohampirenena dia tsy nohadinoany ny Fiangonana ka nisy ny fanolorana lelavola dimy tapitrisa ariary ho fanampiana sy ho famenoana ny kitapom-bolan’ny Fiangonana. Taorian’izay dia nisy ny fitokanana ny takela-baton’ny katedraly sy ny tsangambaton’ny faha dimiambinifolo taona ka Sekoly fianarana Baiboly no atsangana amin’izany. Teo ihany koa ny fanolorana mari-boninahitra ho an’ireo 46 nahavita asa be teo amin’ny Fiangonana. Hetsika maro no ho tanterahan’ny Fiangonana Anglikana eto Fianarantsoa ka anisan’izany ny fankalazana ny faha 150 taonan’ny nahatongavan’ny finona Anglikana tao Mananjary izay ankalazaina amin’ity taona ity ihany.